Goobaha Khadka Tooska ah ee Hindida - Xeerarka gunnada ee Khadka Tooska ah ee Khadka
Illaa iyo hadda, waddanku ma lahan sharci cad oo ku saabsan khamaarka. Sharci ahaan looga ciyaaro Hindiya waxay ku jiri kartaa oo keliya seddex xukun: Sikkim, Goa iyo Daman. Goa waxaa ku yaal toddobo casinos oo ku saleysan dhulka kuwaas oo inta badan la dhigo mashiinnada ciyaarta. Ciyaaraha guddiga waxay ku sugan yihiin shanta dalxiis ee casino ee ku teedsan xeebta Mandovi River iyo casinos ku saleysan dhulka Sikkim.
Maaddaama dowladdu aysan siinin ruqsad ay ku shaqeyso khamaarista internetka ee Hindiya, waddanku sidoo kale otsutstvuetyut sharciyada si gaar ah loogu talagalay khamaarka internetka. Maaddaama khamaarka dhulka laga mamnuucay in badan oo Hindiya ah, inbadan waxay rumaysan yihiin in tani ay sidoo kale quseyso khamaarka internetka. Laakiin ma jirto siyaasad adag oo ka jirta aaggan, oo ka horjoogsanaysa khamaarayaasha Hindida ah inay ku ciyaaraan khadka tooska ah, sidaas darteed way sameeyaan waqtiga oo dhan.
Waqtigan xaadirka ah, Sikkim waa gobolka kaliya ee Hindiya, oo ka shaqeeya suuq nidaamsan oo khamaarista internetka ah, iyo xagaagii 2015 wuxuu furay degelkii ugu horreeyay ee isboortiga isboortiga ee Hindiya. Sikkim sidoo kale waa hogaamiye wuxuuna la socdaa Sikkim Super Lotto. La aasaasay 2002, bakhtiyaanasiibka ayaa wali ah rukhsadaha kaliya ee shatiyeysan ee maxalliga ah ee waddanka ka jira.
In kasta oo ay aragti ahaan suurtagal tahay in la shatiyo noocyo kala duwan oo khamaar iyo sharad isboorti iyadoo la raacayo sharciga qamaarka qamaarka ee Sikkim (2008) iyo qawaaniinta ciyaaraha qadka tooska ah ee Sikkim (2009), haddana midkoodna hawlwadeennada weli lama siinin rukhsad buuxda. Sidaa darteed, ciyaartoyda Hindida ah ee ku raaxeysta ciyaarta turubka iyo bingo, sharadka isboortiga iyo casinos-ka khadka tooska ah waxaa lagu qasbay inay isticmaalaan goobaha khamaarka ee qadka tooska ah.
Isla mar ahaantaana, khamaarayaasha ondiyskie ayaa aad wax u alifay furitaanka deebaajiga iyadoo loo eegayo xaqiiqda ah in macaamil maaliyadeedka tooska ah ee u dhexeeya dadka deggan India iyo goobaha khamaarka shisheeyaha laga mamnuucay khamaarka internetka ee Hindiya. Bishii Maajo 2011, Hindiya waxay qaadatay sharci federaal ah oo ku saabsan teknolojiyadda macluumaadka, oo ay ku jiraan qodobo gaar ah oo lagu xadidayo khamaarka internetka isla markaana lagu soo rogo bixiyeyaasha Internetka ee mas'uulka ka ah xannibaadda goobaha khamaarka internetka ee xeebaha.
Eeg liiska boggaga internetka ee casino ee aqbala ciyaartoy ka socota Hindiya, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka timaadda mashiinnada ciyaarta illaa ciyaaraha khamaarka oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan.
kulan casino free turub ciyaaraha madadaalo